ကြှနျတျောသီသော ကဗြာလေးမြား: ♥ အချစ် အလွမ်း တေးသံ မိုးထက်ညံ ♥
ကဗျာချစ်သူညီအကိုမောင်နှမအားလုံးကို ကျွန်တော်သီသော ကဗျာလေးများ ကဗျာဘလော့လေးမှ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်နော်
♥ အချစ် အလွမ်း တေးသံ မိုးထက်ညံ ♥
ချစ် သူ ရယ်
အချစ်ဆုံးမို့ ပြစ်မမုန်းနိုင်ပါဘူး ......
ဆွေးပူရင်တွင်း ကွေကွင်းခြင်းကို ...
လွမ်းရသူလေ .. ပြောပြချင်ရဲ့ ....
ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ စကားကိုပင် .....
သိပါလေစ ... သြော် .... သိပါလေစ ......
အော် ချစ်ရေ ရာသက်တိုင်းပဲ
ရာသက်ပန်တိုင် ရင်မှာကျွမ်းလို့ ...
မနာရက်နိုင်တဲ့ ဒီက အလွမ်းနဲ့ ....
ဘ၀နွမ်းတုန်း ... အချစ်တွေ ဆုံးရရင်ဖြင့် .....
သြော် အချစ်ရေ ..... မောင့် အသည်းတွေ ... နွမ်းလို့ကြွေပေါ့ .........
ကြွေ ကွဲလို့နွမ်း အိပ်မရလို့လွမ်း မောင့်မှတော့အသည်းတွေ ကျွမ်း
အသဲကျွမ်းမော့င်မှာ ... ကြေကွဲလို့နွမ်း .. အိပ်မရလွမ်းပြီး ....
အလွမ်းလက်ကျန် ရှည်ပါနိုင် ........
ရတုစာဆို နတ်ရှင်နောင်လို့ ဖွဲကာဆိုချင်ပေမယ့်
ချစ်သူကလေ unfriend လုပ်ထားတာပေမို့
ချစ်သူမုန်းတဲ့ ဒဏ် သင်္ချေဆုံးထိ
မောင် မခံပါရစေနဲ့ လား ထာဝရချစ်သူ ရယ်
စာဆို နတ်သျှင် ရတုတင်တော့ .. ပစ်ယူတိမ်းပါး ... စိမ်းကားရက်စွာ ......ဓါတုကလျာ..... နှမပြိုမေ ... ရှောင်ခွာသွေလည်း .......။ အပြစ်မဲ့ကင်း ... မောင့်ချစ်ခြင်းမို့ ...... ချစ်သူ ပြစ်မုန်း ... အဆုံး သင်္ချေ ..... ခံယူသွေလည်း .....။ ရှောင်ဖယ်စိမ်းကား .... ချစ်သူပါးမှ ... ငါ့အား .... နှင်လျှက် .... သူ ရက်စက်ပြီ .......
ပဲပျား အပင်လည်း မဟုတ်ရ
ရွက်ကျပင်ပေါက် မြက်ခြောက်ပင်မျိုး မဟုတ်ရိုးနဲ့
တစ်သက်မှာ တစ်ခါသီး သစ္စာ ကြီးတဲ့ ပေပင်နဲ့မခြား ချစ်မိသူ ဖြစ်နေသားမှ တစိမိုး အောက်မှာ မဖောက်လွဲ ချစ်တစ်ကိုယ်ပဲ မောင် ချစ်တယ်
တစ်သက်တစ်ခါသီး ပေပင်ကြီးလို .... ချစ်သူကိုမူ ... တစ်မိုးတည်းအောက် ... တစ်ရေ စီသောက်ပေမယ့် ...လေလာတိုင်းယိမ်း ... ပဲပင်စိမ်းလို .... နေရာကျပေါက် ... ပင်မြက်ခြောက်လို ... မဟုတ်စေရ ... သစ္စာတရားဖြင့် ၀ိုင်းရံခသည် ...
ငါ့အား စိမ်းသူ ... မင်းလို မူ၏ ..
ခွေယိုင်ကာလဲ မောင်အသည်းတွေ ကွဲတောင
်ချစ် လက်ဖဝါးနု သွေးမဥစေရ
ချစ်သဲ တစ်သက် ပျော်စေကွယ်
မောင့် နှလုံးသား...... ကိုယ်တိုင်ပျိုးပါ့မယ် ... ချစ်သည်းရယ် ... ငြူစူနဲ့ ........။ ရက်စက်လို့ စိမ်းကားပါမှ .. တိမ်းသွားမဲ့ ကြင်နာသူ .....ခွေကာယိုင်လဲ ... မောင့် အသဲတွေ ကွဲပါမှ ... လွဲကာပ လို့ ... မထင်လိုက်လေနဲ့ .... ရွှေလက်တော်နုနု ... သွေးခြေတော် မဥ စေရ ... မောင့် ဘ၀ ကိုပေး .... အသက်ဆက်လို့ ရေးမယ် ......
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 8:37 AM
^!^ ထားခဲ့ပြီလား သူငယ်ချင်းရေ ^!^
♥♥♥ ချစ် ရ သော မောင် ရယ် ♥♥♥
♥ ချစ် တယ် ကောင် မ လေး ♥
~^!^~ ငါ သနားမိတယ် လှိုင်မင်း ရယ် ~^!^~
~@~ မနမ်းထိုက်တဲ့ ပန်းအမိုက်မလေးရယ် ~@~
♥♥♥ တစ်ပွင့်စံပယ် ♥♥♥
မေ မေ ထံ သို့ ရင် ဖွင့် လွှာ
♥ ပိုး ကိုက် တဲ့ ပန်း လေး ရယ် ♥
!!!!! ဂျင် မ လေး ရယ် !!!!!
^@^ ပြုံး ပြုံး လေး သာ ^@^
♥ ^!^ မေ့ မ ရ ပါ လား မောင် ♥ ^!^
♥♥♥ မခွဲဘူးဆိုတဲ့ ချစ်သဲရယ် ♥♥♥
^!^ သီး ခြား က မ္ဘာ ^!^
***** သူ မ ပါ တော့ ဘူး ~~~~~
!! ♥ မေ့မရပါလား မေရယ် ♥ !!
♥♥♥ ယုံကြည်ထားပါ ချစ်သူရယ် ♥♥♥
♥ ချစ်သူအပြုံး ဖိုးရွှေလတောင်ရူံး ♥
♥♥ ခွဲမသွားပါနဲ့ ပြန်လာခဲ့နော် ♥♥ (1)
♥♥ ခွဲမသွားပါနဲ့ ပြန်လာခဲ့နော် ♥♥ (2)
^!^♥ မေ့ ရ တော့ မှာ ပါ တ ကား ♥^!^
♥ ပိတောက်နဲ့မခြား ပေပင်အလား ♥
~~ အကျည်းတန်ည ~
♥ ခဏလေးဖြစ်ဖြစ် ဝင်ကြည့်ပါ ♥
:'( :'( :'( ဒီ နေ့ လည်း စိတ် ညစ် တယ် :'( :'( :'(
♥♥♥ ပန်း ကမ္ဘာ အလား ♥♥♥
~~~ နားလည်ထားပါ ညီမလေးရယ် ~~~
^!^ မေတ္တာပေးလို့ မရသူရယ် ^!^
♥ ကျွန်တော်ချစ်သူ အလှဆုံး ♥
♥♥♥ အ ရမ်း ချစ် တယ် ♥♥♥
♥♥♥ ချစ် ခွင့် လေး များ ပေး သနား ပါ ♥♥♥
♥ ချစ် သူ ရယ် ♥
~~ မင်း ကို အရမ်း ချစ်လို့ ~~
♥ ရွှေဘိုသူသို့ လွမ်းမိတယ် ♥
♥♥ မေ့ အနားမှာပဲ သေပါရစေ ♥♥
!!!! သူမသိလေတိုင်း !!!!
♥ !!!!! ♥ သမုဒယဆူး ♥ !!!!! ♥
♥♥♥ တာတန်ခူးနဲ့ အချစ်ဦးသို့ ♥♥♥
♥ လက်ထပ်ခွင့်လေးပေးသနားပါ ♥
!!!!! မိုး နဲ့ အ တူ !!!!!!
မ မုန်း လိုက် ပါ နဲ့ လား ကွယ်
♥♥♥ မောင့် သည်းဆိုင်ဦး ♥♥♥
~~~ လတန်ခူးမို့ မမေ့ဘူးကွယ် ~~~
♥♥♥ တွဲလက်မဖြုတ်တမ်းပေါ့ ♥♥♥
♥♥ ပြေပါတော့ကွယ် အချစ်ရယ် ♥♥
♥ မွေး နေ့ဆု မွန် ♥
~~~ မောင့် မေတ္တာမှန်ပါက ~~~
!!!! မုန်းယောင်သွေလို့ မချည့်ပါတယ် !!!!
♥♥♥ ပန်းပိတောက်နဲ့ မောင်ချော့မယ် ♥♥♥
^!^ မ ဖြေ သာ အလွမ်း ^!^
တစ်နှစ်မှာမှ တစ်ကြိမ်ပါကွယ် တစ်ကြိမ်မှာမှ ဒီတစ်လထဲ တစ်လထဲမှ တစ်ရက်ပါလေ တစ်ရက်မှာလေ နေ့မြတ်ထူး သည်းဆိုင်ညှာရဲ့ မွေးနေ့ဦး ~~~ တေးသွားပန်း...
လွမ်း မိ တယ် (၂)
လွမ်း မိ တယ် (၂) &++++++++& ချူပ်နရီ ညနေစောင်းမှာဖြင့် အဆင်း တစ်ကယ်ပင် လှပါတဲ့ လုံမငယ် ပျိုတစ်သင်းရယ်က ရေအိုတွေ ကိုယ်စီရွက်ပါလိ...
♥♥♥ မောင့်ချစ်သူ မြန်မာမလေး ♥♥♥
♥♥♥ မောင့်ချစ်သူ မြန်မာမလေး ♥♥♥ ကေသာကျော့ရှင်း မူယာကင်းလို့ ဖြူစင်ဝင်းတဲ့ လမင်းနှယ်.....။ ပါးကွက် ပါးပါး သနပ်ခါးနဲ့ နှုတ...
မာယာမိစိမ်းကားရေ ----------------------- အတိတ်ဆိုတာက အရိပ်လိုပါပဲဟာ နင် ပြောခဲ့တဲ့နော် တစ်ချိန်တုန်းကပေါ့ ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သစ္စာစကားတွေက...
တို့ နိင် ငံ
တို့ နိင် ငံ @^^@ မနက်ခင်း အိပ်ယာနိုးတာနဲ့ မင်္ဂလာ နံနက်ခင်းပါလို့ နူတ်ဆက်ရင်း ကြေးစည်သံတွေ နားဝင်နေတဲ့ နိင်ငံ ရိုးသား ကြိုးစား ကျေးဇူးရှင် တေ...
♥! ကြွေသောမျက်ရည် မေသိစေ !♥
ဘဝအမော မပြေတဲ့ ဝေသောရွက်တို့ ကြွေသောနွေမှာ သောကအပူ ရင်ဝယ်ဆူလှိုက် အလွမ်းများကို ကျောမှာပိုးလွယ် အဆွေးတွေနဲ့ အဖော်ပြုရင်းေ...
ချစ်သော သဲ သို့
ချစ်သော သဲ သို့ +++++++++ သဲ ရေ ဗလာ အချစ်တွေနဲ့ ခဏအဖော် အဖြစ်ဆိုပြီး မောင် အပျော် ချစ်ခဲ့တာတော့ မဟုတ်ရပါဘူးကွယ် ..... သဲ ရေ သစ္စာတရား ကို ...
မုန်းပင်ကို ပျိုး +++++++ အရှက်ပြေ မျက်ရည် စတွေနဲ့ .............. သက်သေတွေ ချပြမနေပါနဲ့တော့လား ခင် .... ရွက်ကြွေ ဘဝမှာတောင် ..... အခက်တွေ ...
ညီမလေး သို့ +++++++ ညီမလေး ရေ လေပြေညင်း ကြောင့် ပန်းတွေ ကြွေခဲ့သလို ညီမလေး ပေးခဲ့တဲ့ မာယာအချစ် ခါးခါးတွေကြောင့် ...
ပန်း ပန်ပြစမ်းပါ ကွယ်
ပန်း ပန်ပြစမ်းပါ ကွယ် *************** တစ်သက် ........... တစ်ခါ ထုံ အဆင့် နဲ့ ..... ငုံ ပွင့်တဲ့ ပန်းပါ ......... ညီမလေး ရ...
ချစ်ရသူလှိုင်မင်း. Awesome Inc. theme. Theme images by MichaelJay. Powered by Blogger.